Baaritaanka takhtarka dumarka | På blodigt allvar
Baaritaanka takhtarka dumarka
Qoraalkaan waxaan kaaga warbixineynaa micnaha uu leeyahay baaritaanka takhtarka dumarka si aad si buuxda ula socoto waxa aad ka filan karto baaritaanka: inta uusan billaaban ka hor, inta uu socdo iyo marka uu dhammaado, intaba.
Wadahadal hordhac ah
Inta badan takhtarka dumarka keli ayuu kugu qaabilayaa baaritaan ka billaabanaya wadahadal ku saabsan dhibaatooyinka aad sheeganeyso. Si uu dhibta dhinac walba uga fahmo wuxuu takhtarku ku weydiinayaa su’aalo u kuurgal ah. Waana marka ay ku caawineyso inaad hore isku sii diyaarisay.
Baaritaanku wuxuu qaataa 20 ilaa iyo 30 daqiiqo.
Sidaas ayaad isku diyaarineysaa
Waxaa la gaaray xilliga baaritaanka
Hadda waxaad dharka ka saareysaa xagga hoose ee jirka. Inta badan dhar-iska-saarku wuxuu ka dhacaa daaha qolka baaritaanka gadaashiisa, inta badan waxaad iyana heleysaa shukumaan ama buste yar oo aad guntato. Dabadeed waxaad ku fariisaneysaa kursi dheer oo yaalla qolka baaritaanka oo leh meelo lugaha la saarto iyo meel dhabarka lagu tiiriyo oo gadaal u janjeerta. Lugaha waxaad saareysaa meelihii loogu talogalay, takhtarkuna hortaada ayuu fariisanayaa si uu hoostaada u baaro.
1. Ugu horreyn wuxuu takhtarku eegayaa siilka dushiisa. Haddaad gudan tahay wuxuu takhtarku kuu sheegayaa inay taasu baaritaanka intiisa kale saamayn ku yeelan doonto.
2. Dabadeed wuxuu takhtarku si taxadar leh u kala durkinayaa dibnaha siilka, wuxuuna gudaha gelinayaa qalab kala baxsan oo hoos u riixaya siilka dhinacyadiisa si loo arko afka ilmagaleenka. Takhtarku wuxuu isticmaalayaa xayr jilicsan oo fududeyneysa sibxashada qalabka. Xayrtu waa yara qabowdahay. Baaritaanku waa inuusan xanuun keenin, haddii kale waa inaad u sheegto takhtarka.
3. Marka qalabka la soo saaro takhtarku wuxuu siilka gelinayaa laba farood isagoo gacanta kale ku taataabanaya ugxansidayaasha iyo ilmagaleenka dushooda si uu u ogaado hadday jiraan wax burooyin ama xanuun ah. Taas oo ay sabab u noqon karaan caabuq ama infekshan.
4. Marmarka qaarkood waxaa xitaa la sameeyaa baaritaanka codka ultrada iyadoo kamarad ku xiran ul yar oo dhuuban siilka la dhex geliyo. Tan xitaa xayr ayaa loo isticmaalaa. Muuqaalka jirkaaga gudihiisa ayaad kala socon kartaa shaashadda ku ag taal kursiga baaritaanka.
Jirkaaga adiga ayaa u taliya oo xaq baad u leedahay inaad baaritaanka joojiso mar allaaleh iyo markaad xaaladda u bogi weydo. Had iyo jeer u sheeg takhtarka hadday jiraan wax aad ku xanuunsaneyso.
Wadahadal dabiib ku saabsan
Marka uu dhammaado baaritaanka lagu qabanayey kursiga takhtarka dumarka waxaa la gaaraa xilliga dabiibka laga wada hadli lahaa. Wey badan yihiin sababaha caado-xanuunka, laakiin waxaa inta badan lagu daaweeyaa hoormoonno, tusaale ahaan p-piller*. Xaaladaha aadka u daran wuxuu takhtarku bukaanka u qori karaa kiniin xooggan oo xanuun-dejiye ah. Daawada dhigaalka u baahan adigaa ka doonanaya farmashiyaha.
Hadday soo baxdo inaad leedahay dhibaatooyin ay tahay in hab kale loo dabiibo wuxuu takhtarka dumarku kuu gudbinayaa isbitaal. Taas micneheedu waxay tahay in isbitaalku uu kuu soo diri doono ballan baaritaan cusub iyo laga yaabee qalliin.
Dhawr bilood ka dib waxaa dhici karta in la dareemo in dabiibka lagu liibaanay - waxay qiyaastii qaadataa 3 ilaa 6 bilood, taas oo hadba ku xiran dabiibka noociisa. Haddaad dabiibka ku roonaan weydo waa inaad takhtarka soo xiriirisaa oo dalbataa baaritaan cusub! Haddii takhtarkii dumarka ee aad la kulantay aadan ku qanacsanayn waxaad xaq u leedahay inaad takhtar kale raadsato.
Xuquuqdaada xag daryeel caafimaad
Youmo.se: Sidan ayaad samaynaysaa haddii aad u baahan tahay daryeel
*P-piller: Daawo ka hortag oo ah kiniin maalin walba la qaato si uureysiga looga hortago. Waxaa caadiyan ku jira hoormoonnada ostrojiin iyo brojestangen, laakiin waxaa iyana jira noocyo ostrojiin la’aan ah.
Qoraal loo kaashaday RFSU. Translation by Språkbolaget.
Afar tallaabo oo daryeel lagu raadsado
Halkaan ayaad wax u doonan kartaa
Ballanta ka dib
Xuquuq xag iskuul iyo xag daryeel